Indlela i-Magnet Treatment Treatment Works ngayo
Ngaba Magnetshi Zonyango Unamandla Ophilisa?
Ukulawula Ubunzima Bomsulwa Ngamayeza Amagnetic
Iingcali ezize zenze ixesha elide zithi amatshini ezonyango anamandla okuphulukisa, kwaye ezinye izifundo zibonisa ukuba zilungele.
Amandla amaninzi kunama-Sham
Kwiphononongo epapashwe kwi- Archives of Medicine and Rehabilitation , abaphandi e-Baylor College of Medicine e-Houston bafumana amagoritha ukuba asebenze ngakumbi kuneemakethe ze-sham ezithintela iintlungu ezibangelwa yi-post-polio syndrome. Le syndrome, ephawulwe yintlungu yomlenze , ichaphazela ukuya kwi-20% yezifo zepolio emva koko ebomini.
Kwisifundo esilawulwayo, i-76% yezigulane eziphathwe ngetemetha zalufumana uncedo lwentlungu. I-18% kuphela ephathwe ngayo i-magnet ye-sham ifumanekile.
IQumrhu Elikhulayo loBungqina licebisa iiMagnet Therapy Works
Kweminye uphando, iimakethi zibonakalise ziphumelele.
Abaphandi e-Tufts School School of Medicine eBoston babonise ukuba amatshini anceda ukukhulula ubuhlungu besisu obubangelwa yilo meko engaqondakaliyo. Esi sifundo, izigulana ezalala kwiimitha zamagnetic zafumana intlungu enkulu kunezigulana ezalala kwiimitha eziqhelekileyo.
Uphando oluqhutywe kwiNew York Medical College yaseValhalla, iipiliti zamagxisa ezinyawo ziphumelele kunokuba zingekho magnetic foot pads ekunciphiseni i-numbness, ukubetha, kunye nentlungu enxulumene nale ngxaki enxulumene nesifo sikashukela. Ubungqina bubonisa ukuba malunga nama-80% abantu abaneentlungu ezingapheliyo banokufumana inzuzo kwi-magnetic therapy.
Indlela Amagnethi aXhobisa ngayo Ubuhlungu
Xa iqhutywe ngokubhekiselele kwesikhumba, ama-magnets ahlaziya iindonga ze-capillary, ngaloo ndlela zikhuthaza ukuhamba kwegazi kwindawo ebuhlungu.
Baya kunceda ukukhusela i-spasms ye-muscle eyenza iintlobo ezininzi zeentlungu, ngokuphazamisa ukuhlukana kwemisipha. Baphinde baphazamise iimpendulo ze-electrochemical ezenzeka kwiiseli zesisongomzimba, zithintela amandla abo okuhambisa imiyalezo yentlungu ebuchosheni.
Ubuhlungu obungapheliyo bunokulawulwa nge-aspirin kunye nezinye i-anti-counter-counter and countercription.
Nangona kunjalo, ngokungafani namachiza eentlungu, amatshini ayenayo nayiphi na ingozi yemiphumo emibi.
Ukukhetha nokulinganisa iMagnetti yezoNyango
Amagnethe ezonyango angena kwiqela elincinci lemilo, ubukhulu kunye namandla. Bahlala kwixabiso ukusuka kwii-dollar ezihlanu ukuya kwidola le-900.
Ngokuqhelekileyo kulungele ukuqala ngenye yamaritha aneentsimbi ezenziwe ngehlabathi elingaqhelekanga neodymium-boron. Kwiinkoliso ezininzi, ezi zikhulu zisebenza ngokufanelekileyo kunye nezindleko ezingaphantsi kwamanye amatshini.
I-Magnetism iyalinganiswa kwi-gauss. Umtshini oqhelekileyo wefriji unama-10 gauss. Okubuthathaka kakhulu ukungena ngaphakathi kwesikhumba kwaye akunakwenzeka ukuba kuncedo kunanto nayiphi into engaphezulu. Iimitha zamagqirha ziba namandla kumanqanaba angama-450 ukuya kuma-gausses ayi-10 000. Ephakamileyo i-gauss, bhetele ukhululo lweentlungu.
Ukubeka Amagnethe Ukusebenza
Umbane kufuneka uxhomekeke kwesikhumba ngokuthe ngqo kwindawo ebuhlungu . Abanye abantu basebenzisa izibhanki eziqhotyoshelweyo eziqhelekileyo ukuze zifake izibane. I-Transpore, itekisi yephepha eyenziwe ngu-3M, isebenza ngcono. Igcina kakuhle, kwaye ayiboni iinqwelo zesikhumba xa isuswa.
Ukuba i-magnet ihluleka ukubonelela ngeentsuku ezimbalwa, zibuyisele umbane kummandla osondeleyo we-acupuncture point. Ukufumana ezi ngongoma kumzimba, qhagamshelana nencwadi ngokukhishwa kwesikhumba.
Ukuba ukubeka kwakhona i-magnet kuhluleka ukuzisa isiqhelo kwisithuba seentsuku ezingama-30, ingxaki ayiyi kusebenza. Sitshintshela kolunye uhlobo lomatshini okanye uthethe nodokotela wakho malunga nokusebenzisa imilenze yokubulala imilenze okanye enye indlela eqhelekileyo.
Ukuxhamla Ubuhlungu Ukusebenzisa Amagnethi
Ukuhamba kweenyawo: Izibilini ze-Magnetic ziyakunciphisa intlungu yeenyawo kunye neemvakalelo ezivakalayo emilenzeni emva kokuma yonke imini.
I-Arthritis: Ukuba intlungu ibhekelwe kwiminwe yakho, i-neo magnet ifakwe kwiqela elichaphazelekayo kufuneka lenze inkohliso. Okanye, unako ukugqoka i-band magnetic band.
Ubuhlungu Bokubuya: Faka iimakethi ezine malunga ne-1.5 "kwicala lomgca, ezimbini kwicala ngalinye. Ukuba ukufaka isicelo nokususa amaninzi amaninzi kubonisa ingxaki, sebenzisa i-magnet ye-strip magnet okanye i-back magnetic back brace.
Intloko: Amakhonkethi eTape kwiitempile zakho okanye ngasemva kwentloko yakho, ngaphezu kwentamo. Okanye, sebenzisa i-headband magnetic.
Elbow Tennis: Sebenzisa i-band magnetic ejikelezayo. Iqela elifanayo liyanciphisa intlungu yesandla kunye nengalo ebangelwa ukulimala kokuphindaphinda.
> IiNcwadi zoLondolozo lweMpilo kunye nokuQinisekisa, i-ACRM
> Ukulawula Ubunzima Bomsulwa Ngonyango Oluphezulu , uRon Lawrence, MD
> I- Magnet Therapy: I-Pain Cure Alternative, uRon Lawrence, MD
> I- Magnetic Insoles , uRon Lawrence, MD
Zixhobo zo kuhlenga
Indlela Yokuphendula Xa Ubomi Bukulahla I-Curve Ball
Indlela yokuphakamisa ukuBakho kwamaVibrational Frequency
Ubomi bexesha elidlulileyo lokuphila e-Atlantis
Ukufunda kweZibhalo kwiVeki yesihlanu yeLente
Izinto ezi-6 zokumazi nge-Gymnast Bart Conner
Inkcazo ye-Ideology kunye neengcamango emva kwayo
I-Texas kunye ne-Oklahoma: Umlambo oMlambo obomvu
Imixholo yokufunda kwiSuku lokuBonga
Ngaba i-Dinosaurs yalala njani?
Ukudibanisa i-verb-spelling Change Verb 'Manger' ('Ukutya')
Umthandazo WamaKristu Ukunciphisa Ubunzima Bokuqhawula
Ukuhlaziywa: ProForm Le Tour de France Isizukulwana sesiBini 2 esiPhakathi
Imibuzo yeeNgxoxo kunye neMininzi yokuCoca: Abasebenzi bokuCoca
Ukwahlukana Phakathi kwe-Vers Versus Derrière / Avant Versus Devant
Iincwadi ezi-8 eziphambili ze-GRE eziPhambili zokuthenga ngo-2018